Somaliland: Wasiir Ku-xigeen Wasaaradiisu u Dalacsiisay Wasiirul Dawle Aanu Madaxweynuhu Magacaabin - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiir Ku-xigeen Wasaaradiisu u Dalacsiisay Wasiirul Dawle Aanu Madaxweynuhu Magacaabin
Wasiir Ku-xigeenka Amniga ee wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye, ayaa maalmihii u dambeeyay loo cumaamaday xil aanu madaxweynuhu u magacaabin oo ah Wasiirul dawlaha amniga ee wasaaradda daakhiliga.
Xilkan ayaa markii u horeysay laga maqlay 13/4/2016 ka dib markii qoraal ka soo baxay wasaaradaasi oo uu ku saxeexnaa afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo la yidhaahdo Jamaal Cabdi Muxumed, lagu sheegay inuu Wasiirul dawluhu uga digay madax-dhaqameedka dalka inay ka qeyb galaan doorashadda Soomaaliya.
War-saxaafadeedkan Wasiir ku-xigeenka amniga loogu dalacsiiyay xil aanu madaxweyne Axmed Siilaanyo u magacaabin, ayaa rayul caamka bulshadu su’aalo kala duwan ka keeneen, iyagoo is weydiinayay “goorma ayaa la soo saaray wareegtada lagu dalacsiiyay” “Haddii Wasiir ku-xigeenkii amniga uu noqday Wasiirul dawlaha wasaarada yaa xilkiisii loo magacaabay”iyo qoddobo kale oo mowduucan ku taxan.
Ma jiro wax cudur-daar ah oo wasaaradda daakhiligu ka soo saaray inuu si khalad ah uga baxay ereyga Wasiirul dawle iyo in kale, taasina waxay keentay in hadal haynta bulshadda ee arrintani ay sii xoogeysato.
Wasiir Ku-xigeenka Amniga Maxamed Muuse Diiriye waxa uu shalay Boorame ka furay shir laba maalmood socon doona oo ay iskugu yimaadeen dalalka Somaliland iyo Itoobiya. Shirkan oo ay ka qeyb galeen madax ka socotay labada dawladood ee dawladda Federaalka Itoobiya iyo Dawladda Somaliland iyo madaxda ciidammada booliska iyo waaxda socdaalka ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, Somaliland, madaxda kastamyada iyo canshuur qaadista iyo masuuliyiinta heer gobol iyo degmo ee afar gobol oo kala ah Faafan iyo Siti oo ka mid ah gobollada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Awdal iyo Selal oo ka tirsan Somaliland.
Waxa Telefishanka madaxa banaan ee Horn cable TV ay warkii shirkan ku baahiyeen inuu Wasiirul dawlaha Amnigu furay. Iyadoo haddana la xaqiijiyay in Maxamed Muuse Diiriye uu wali yahay Wasiir Ku-xigeenka amniga ee wasaaradda daakhiliga. Bal nala daawada warkan lagu sheegayo Wasiirul dawlaha.